नर्वेमा बन्यो विश्वकै अग्लो काठको टावर ! - Everest Dainik - News from Nepal
नर्वेमा बन्यो विश्वकै अग्लो काठको टावर !
ओस्लो । नर्वेमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो काठको टावर निर्माण कार्य सकिएको छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार टावर ८५.४ मिटर अग्लो रहेको छ । जसमा १८ तला रहेको छ ।
सो टावर वातावरण मैत्री र आगोले क्षति पुर्याउन नसक्ने खालको रहेको समाचारमा जनाइएको छ । टावरको नाम ‘एमजोस’ राखिएको छ । ओस्लोदेखि झण्डै एक सय किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको एउटा तालसँगै टावर बनाइएको बताइएको छ । टावरमा नयाँ काठ, पुनः प्रयोग गर्न सकिने पुराना काठका सामग्रीहरुलगायत प्रयोग गरिएको निर्माणकर्ताहरुले बताएका छन् ।
काठले बनाइएको टावरले विश्वलाई नै सास फेर्नलायक बनाउन हामीलाई सहयोग गर्नेछ, एक जना व्यापारी अर्थर बुच्चर्डले भने । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले आफूलाई काठको टावर बनाउन प्रेरित गरेको उनले बताए ।
टावर खासमा ८१ मिटरको रहेको छ भने बाँकी ४.४ मिटर यसको छानो रहेको छ । त्यही छानोले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्लो बनाएको छ । यसअघि अष्ट्रियाको भियनामा बनाइएको होहो नामक टावर ८४ मिटर रहेको छ ।
भियनाको टावरमा मिश्रित सामग्रीहरु रहेका छन् । त्यसमा ७६ प्रतिशत काठ रहेको छ भने बाँकी अन्य सामग्रीहरु रहेका छन् । त्यसैले त्यो टावर अहिले नर्वेमा बनाइएको एमजोस टावर जस्तो होइन । -रासस
ट्याग्स: Narve, एमजोस, ओस्लो, नर्वे
आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भाषण गर्न दिएपछि ट्याक्सी व्यवसायीका अध्यक्ष मगर पद
३२ देशका २३९ वैज्ञानिकको दाबी : कोरोना भाइरस हावाबाट सर्छ
नेपाल एयरलाइन्सका ३ पाइलटसहित १४ कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ